5 Best Trips Day By Train From Amsterdam | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Trips Day By Train From Amsterdam
Amsterdam dia tanàna mahafinaritra ny fitsidihana. Misy be dia be ny mahita sy hanao eto fa ho tsy mety leo. Na izany aza, dia mety mbola ho lehibe ny zavatra afangaro ny. Izany dia satria lehibe Amsterdam hanombohana ny andro mahagaga maro fitsangatsanganana.
Noho izany, raha te ho any amin'ny sasany amin'ireo tsara indrindra avy any Amsterdam andro fitsangatsanganana, tsy maintsy misafidy ny tsara toerana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia handrakotra ny dimy andro fitsangatsanganana azonao atao avy any Amsterdam. koa, dia homenay anao ny fanazavana rehetra ilainao ao amin'ny sy ny fomba hahatongavana toerana ireo lamasinina. Tamin'ny faran'ny ny sombin, anao dia tsy ny zavatra rehetra no mila manomboka tsy mampino traikefa nahafinaritra avy any Amsterdam!
1. London: Ny iray amin'ireo tsara indrindra avy Amsterdam Trips andro!
Rehefa nanapa-kevitra ny handeha lavitra tamin'ny indray andro avy any Amsterdam, ny ankamaroan'ny olona hifidy na inona na inona ao amin'ny manodidina. Inona no tonga ao an-tsaina dia tanàna any Holandy, Belzika, ary angamba Alemaina. Na izany aza, dia zara raha manapa-kevitra ny handeha ho any London.
Ao ny heviny, izany no iray amin'ireo tsara indrindra avy any Amsterdam andro fitsangatsanganana azonao atao. Nahoana? Izany dia satria androany diany matetika odian-tsy hita. Noho izany antony izany, dia afaka manana tsy manam-paharoa traikefa raha tsy misy ny manahirana ny mpizaha tany be loatra mirohotra hatrany hiditra ny toerana.
Ankoatra izany, London dia tanàna goavana be dia be ny zavatra mahafinaritra ny mahita sy hanao. Plus, dia feno tantara sy mahagaga trano. Raha tsy izany rehetra izany, dia ihany koa ny hahazo ny fahafahana tanteraka ambanin'ny malaza anglisy Channel.
Raha manapa-kevitra ny handeha, eto dia kely Info ilainao amin'ny mitaingina fiaran-dalamby. Mitaky manodidina ny ora efatra mba tonga London alalan'ny fiaran-dalamby. Izy io dia somary intsony, fa tahaka ny olona maro mandeha any mitovy faritra lavitra avy any Amsterdam, dia mihoatra noho ny azo atao. Ny tokony ataonao dia manomboka aloha ary hiverina tara, ary dia hiafara manana andro iray manontolo tany Londres.
2. efa nampiasaina: Aiza ny Fairy Tale Nanomboka
Fantatsika rehetra fa ny hatsaran 'ny ankamaroany Amsterdam lainga amin'ny lakandrano sy ny maritrano. Na izany aza, Fantatrao ve fa izay rehetra misy ao Bruges, Belzika? Sady koa anie, dia milaza ny Bruges ny Venise any avaratra, tsy Amsterdam!
Inona no more, Bruges tsy manana rehetra izany fa iray amin'ireo tsara indrindra angano tanàna rehetra an'i Eoropa. Izany no mahatonga dia lavitra any ny anankiray amin'ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny andro fitsangatsanganana avy any Amsterdam.
Raha manapa-kevitra ny handeha ho any Bruges, dia hahazo ny fahafahana mahatalanjona amin'ny sasany amin'ireo trano tsara tarehy indrindra ao Moyen Âge rehetra Eoropa. Ary raha izay tsy ampy, Bruges mirehareha ny sasany amin'ireo matsiro indrindra tanana sôkôla!
Rehefa nandeha avy any Amsterdam ho any Bruges, azonao atao mora foana mandeha lamasinina. Ny diany rehetra dia tena mora vidy, ary dia handray anareo telo ora latsaka ho tonga ny mahagaga tanàna.
Amsterdam ho Bruges Lamasinina
3. The Hague: Tsy maintsy tratrarinao io!
Ary ny zavatra rehetra ny andro fitsangatsanganana avy any Amsterdam no atao, Hague iray izay tsy tokony ho hita. Ny tena antony fa ny zava-misy fa Hague dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Holandy. Izany koa dia iray amin'ireo tsara indrindra.
Tokony tsy mila intsony antony mitsidika. Na izany aza, raha te-hahafantatra bebe kokoa, dia tokony ho fantatrao fa ny Hague no tena akaiky an'i Amsterdam. The mitaingina fiaran-dalamby ihany no maka manodidina ny ora, ary dia tena mora vidy.
The Hague dia ny foiben'ny governemanta any Holandy, mba afaka manantena ny hahita miavaka be dia be ny trano. Ny tanàna ihany koa ny toerana misy ny Fitsarana Iraisam-pirenena, izay hafa toerana tsy maintsy jerena.
Amin'ny farany, rehefa tonga ny Hague, ho azo antoka mba hitsidika Madurodam. Izy io dia mijanona kely no antoka tena mankafy.
Ghent ho The Hague Lamasinina
Brugge ho The Hague Lamasinina
4. Cologne: Ny hita matetika Gem Of Alemaina
Alemaina dia firenena iray feno tanàn-dehibe maro miavaka. Na izany aza, zara raha ny olona no mihevitra ny ankamaroan'izy ireo noho ny andro iray nivezivezy avy any Amsterdam.
Na dia izany no izy, Alemaina Mbola mendrika mitsidika. Izany Marina indrindra izany, raha manapa-kevitra ny handeha ho any Cologne, matetika hadino ny vatosoa Andrefana Alemaina. Tanàna ny asa lehibe lainga eo amoron 'ny mitovy Rhin mahatalanjona River. Inona no more, Cologne no ivon'ny toekarena, kolontsaina, ary ny fizahan-tany Alemaina Andrefana.
Raha manapa-kevitra ny handeha ho any an-tanàna mahatalanjona ity, hanana an'arivony taona ny tantara hidera. Ao ny tena afovoan-tanàna lainga goavana katedraly. Izany no iray amin'ireo indrindra mahatalanjona toeram-pivavahana dia hahazo hahita nanerana an'i Eoropa.
Ny zavatra tsara momba ny Cologne dia fa manodidina ny adiny telo ihany izy amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Noho izany, raha manapa-kevitra ny handeha tany nandritra ny iray andro lavitra, dia tonga ny tanàna tsy fotoana.
Berlin ny Aachen Lamasinina
Dresden ho any Cologne Lamasinina
Aachen ho any Cologne Lamasinina
5. Day Trip To Paris From Amsterdam: Inona no More To Say?
Fiaran-dalamby avy any Amsterdam fitsangatsanganana ho any Paris taloha ela be. Na izany aza, toy ny tara, izy ireo ihany no manodidina ny telo ora farany, manao Paris toerana tonga lafatra ho an'ny iray amin'ny andro nivezivezy avy any Amsterdam.
Malaza noho ny kanto tranombakoka, maritrano, ary ny nahandro, Paris no toerana iray izay tsy mila fampidirana. Misy kely ny azo lazaina momba ity tanàna malaza izay mety romanticize bebe kokoa azy io, na hitaona anareo.
Avy amin'ny Eifel Tower any Versailles, Paris dia feno ny safononoky ny toerana mba hitsidika ary ny zavatra tokony hatao. Ny tanàna ny fahazavana no toerana malaza indrindra amin'izao tontolo izao, ary fantatsika rehetra ny antony. Noho izany, aza mandany ny fotoananao sy ny famakiana momba izany fotsiny handeha any!
Ireo dimy andro fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Amsterdam Azo antoka fa hanao ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina, ary satria izy rehetra mora hita ety ivelany lamasinina, tsy misy fialan-tsiny ianao tsy fitsidihana rehefa any Eoropa!
ary, Raha toa ka manana fanontaniana, dia aza misalasala mifandray Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Trips Day By Train From Amsterdam” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)